गिद्दको औसत आयु २०० बर्षको हुन्छ तर पहिलो १०० बर्ष पुग्दै गर्दा उस्का प्वाख र ठुडहरु बृद्ध र यति कमजोर हुन्छन कि उ उड्न र आहार खोज्न पुर्णतः असफल हुन्छ। त्यसपछि उ संग दुइ बिकल्प हुन्छन; यतिकै मर्ने या पुरानो संरचना उखेलेर फ्याक्ने ताकी नयाँ प्वाख र ठुड पलाउन सकोस। यो अबस्थामा उसले दोस्रो बिकल्प रोज्छ र पहिले ढुङ्गामा बजारेर आफ्नो पुरानो ठुड रक्ताम्य पार्छ अनि उहि ठुडले ठुगी-ठुगी आफ्ना सारा प्वाँख निकाल्छ शरिर पुरै रक्ताम्य हुन्छ। कैयौं दिन भोकै बस्छ। अनि, केहि समयपछी नंया ठुड र प्वाँख पलाउछन र फेरि उ युवा गिद्द झै जे पनि गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छ।
०५९-०६० तिर म बाम विद्यार्थी आन्दोलनमा बामे सर्दै गर्दा, जीबन शर्माका गीत, हाँक र जनएकतामा प्रकाशित हुने मोहनबिक्रम र नारायणकाजीका लेख र डिलाराम आचार्य, लीलामणि पोखरेलहरुका भाषण सुन्दा साच्चै सोचमग्न हुन्थेँ। ८-९ कक्षाको बिध्यार्थी, उमेरले काचै थिएँ । तर, उल्लेखित मान्छेहरु साच्चै बिद्वान र महान भएको भान हुन्थ्यो।
जब उच्च शिक्षाका लागि पाल्पाबाट म बुटवल झरे। मेरो संगत अर्घाखाँची त्यो पनि डिलाराम आचार्य सांसद रहेको क्षेत्रका मान्छेसंग हुन पुग्यो। सानैबाट मलाइ कौतुहलता थियो कि डिलारामको क्षेत्र कस्तो होला? ०६४-६५ तिर मित्र नेत्र भुसाल र इन्द्र भुसालसंग म पहिलो पटक जनमोर्चाको पकड भएको क्षेत्रमा जादै गर्दा मलाइ लागेको थियो कि उक्त क्षेत्रका मान्छेको सोंच, व्यबहार र दैनिकी, जीबन शर्माको गित, डिलारामको भाषण र मोहनबिक्रमको लेख जस्तै सुन्दर होला। अफसोच, कांग्रेस र एमालेले जित्दै आएको मेरो गाउँको दैनिकी र जनमोर्चाले जित्दै आएको उक्त गाउँका बासिन्दाको दैनिकिमा कुनै अन्तर थिएन। बरु, केहि समय पश्चात मैले आदर्श मान्ने उनै नेताको यौन काण्डको समाचार मेरो कानमा पर्‍यो। र, म मेरो भ्रमको सपनाबाट बिउझिएँ।
रुकुम-रोल्पा, माओबादी जनयुद्धको आधारभुमी जहाँबाट माओवादी आन्दोलनले दुनियाँ बदल्ने सपनाको मार्गचित्र आफुसंग भएको शंखनाद गर्यो। रुकुम र रोल्पामै टेकेर सयौं युद्द जित्यो तर दुर्भाग्य हिजो मात्र रुकुममा अन्तरजातिय प्रेम गरेकै कारण २० बर्षिय युबक र उसका साथिलाइ प्रेमिकाको घरमै बोलाएर हत्या गरिएको र त्यहाँका जनप्रतिनिधि समेतले पीडितलाइ बेवास्ता गरेको समाचार बाहिरियो। जनईलाकाका बासिन्दाको चेतनाको स्तर हेरौं त कति तल रहेछ। अनि कति अमानवीय रहेछन मान्छेहरु? १२ बर्षे जनयुद्ध र त्यसपश्चात उक्त क्षेत्रका कम्युनिस्ट नेताहरु आफु अनि आफ्नो गाउ-घर र परिबेशलाइ सामान्य मानबियता के हो भन्ने समेत सिक्न/ सिकाउन नसकेका रहेछन।
राजेन्द्र महतो, सरिता गिरि, महन्त ठाकुर, सरदशिंह भन्डारी आदिले तिसौं बर्षदेखी मधेसमा नेतृत्व गर्दै आएका हुन। दर्जनै पटक उनिहरु सांसद र मन्त्री भए र अझै पनि उनिहरु आफुलाइ मधेसि समुदायको मुक्तिदाता सम्झिन्छन। तर सत्य उनिहरु भन्दा कोसौ पर छ।
मधेसि समुदायको आत्म-सम्मानमा पहाडिया समुदायले जति चोट पुर्याएको छ त्यो भन्दा हजारौं गुणा बढी थिचोमिचो माथि उल्लेखित नाम र तिनका दाइने हातहरुले मधेस र मधेसी समुदायमा गरेकाछन। आज पनि गरिबी, अशिक्षा र जातिय समस्याको पहाड छ मधेसमा। आज पनि दाइजो निहुमा चेलिहरु जिउदै जलेर मर्नु परेको छ। तर, अफसोच मधेसको मुल नेतृत्वलाइ त्यो सारा समस्या सँग केहि लिनु दिनुछैन। बरु यहि समास्या देखाएर आफ्नो स्वार्थको रोटि उनिहरुलाइ सहज भएकोछ।
गत १५ बर्ष देखी नेपालको मुल राजनितिक नेतृत्वले सामन्तबाद भनेको राजा हुन र उसको अन्त्य पछि मुलतः यो सकियो भन्यो। संबिधानमा समाजबाद उन्मुख लेख्यो र अब देश समाजबादमा हाम फालिसक्यो भन्यो।
केपि ओलिले त झन समाजबाद भन्दा पनि अगाडी ‘समृद्ध समाजबाद’ अनि सुखै सुखको कबिता नै कोरेर बसेका छन। ओलि आफु, यति, ओम्नि र भाट्भटेनी ग्रुपले प्राप्त गरेको सुख नै आम जनताले प्राप्त गरिसकेकोमा ढृढ र ढुक्क देखिन्छ्न।
उल्लेखित तथ्यहरुले हामिलाइ यहि प्रमाण दिन्छ कि, हामिले बोलेका, सुनेका वा संबिधानमा लेखेका बुट्टेदार शब्दहरु भन्दा हाम्रो समाज कोसौ पछाडी छ। प्राप्त राजनितिक परिवर्तनले आम जनताको दैनिकीमा नगन्य प्रभाव परेकोछ। सारत: हाम्रो नेतृत्व र नेपाली समाजको चेतनाको स्तर अझै पनि औसत भन्दा निकै तल छ। सामन्तबादका आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जराहरु आज पनि जहाँको तहिं र जस्ताको तस्तै छन। बरु, हिजो एउटा राजा थिए। आज हजारौंको मस्तिष्कमा नयाँ राजा हुने भुत सवार भएकोछ।
“एक भनाइ अनुसार गिद्दको औसत आयु २०० बर्षको हुन्छ तर पहिलो १०० बर्ष पुग्दै गर्दा उस्का प्वाख र ठुडहरु बृद्ध र यति कमजोर हुन्छन कि उ उड्न र आहार खोज्न पुर्णतः असफल हुन्छ। त्यसपछि उ संग दुइ बिकल्प हुन्छन; यतिकै मर्ने या पुरानो संरचना उखेलेर फ्याक्ने ताकी नयाँ प्वाख र ठुड पलाउन सकोस। यो अबस्थामा उसले दोस्रो बिकल्प रोज्छ र पहिले ढुङ्गामा बजारेर आफ्नो पुरानो ठुड रक्ताम्य पार्छ अनि उहि ठुडले ठुगी-ठुगी आफ्ना सारा प्वाँख निकाल्छ शरिर पुरै रक्ताम्य हुन्छ। कैयौं दिन भोकै बस्छ। अनि, केहि समयपछी नंया ठुड र प्वाँख पलाउछन र फेरि उ युवा गिद्द झै जे पनि गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छ।”
यहि गिद्दकै कुरा हामि र हाम्रो समाजमा पनि लागु हुन्छ। गिद्दले झै हामिले पनि आफ्नै मष्तिस्कमा गडेका पुराना अवयब हटाउन पर्ने हो। अफसोच, हामिले परिबर्तनको बाधक भन्दै अर्काको अनुहारमा हिलो छ्यापिरह्यौं। तर, आफ्नो अनुहारमा लागेको आची कहिले देखेनौं या देख्न आबस्यक ठानेनौं ।
परिबर्तन, रुपान्तरण भन्न जति सजिलो छ, त्यतीकै असहज छ, आफैलाइ बदल्न। चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओले त्यसै भनेका हैनन, परिबर्तन चाहान्छौ भने पहिले आफ्नै टाउकोमा आगो लगाउ।” के म:म भन्दै हामी सबैले आफ्नै टाउकोमा झोस्न तयार छौँ ?